Shina · Mey, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Mey, 2018
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Mey, 2018
Fampandrosoana 25 Mey 2018
Shina: Hira Avatar vaovao, aingam-panahy avy amin'ny fandroahana an-terisetra
Mediam-bahoaka 15 Mey 2018
Miorina amin'ny fomba fahitan'ny Shinoa marobe ny sarimihetsika Amerikanina Avatar, ny "sarin'ny fandravana mahery setra amin'ny fiainanay andavanandro", namoaka antserasera hala tahaka tamin'ny hiran'ny sarimihetsika ny vondrona mpanakanto lahatsary sy hira, Zhou Hongtao, Gong Kaijie ary ilay mpihira Lizi, ka nisary endrika Shinoa ny lohateny hoe 'Fandroahana an-kalamanjana'.
Shina : Olona Mpiahy Ireo Blaogera Mafana Fo?
Fahalalahàna miteny 10 Mey 2018
Ahoana no hamaritana ilay blaogera MSN Spaces roa amby roampolo taona Zeng Jinyan? Loza mitatao ho an'ny filaminan'ny firenena ve ? Mpikatroka mafana fo miady amin'ny SIDA izay mitondra fanohanana, fifaliana ary fanantenana ho an'ireo kamboty tsy tambo isaina nateraky ny otrik'aretina SIDA ve ? Vehivavy tanora iray lasa mpanao hiringiriny taorian'ny nakan'ny fanjakana an-keriny ny vadiny nandritry ny iray volana mahery ? Mpiahy mitondra tenin'ireo niharan'ny tsy rariny ao anatin'ny faribolana sosialy ao Shina kanefa tsy mahateny ve ?
Eoropa Andrefana 08 Mey 2018
Shina: Tsy mahazo hoentina ao amin'ny lalao olaimpika ny sora-baventy “Alefa Shina!”
Fanatanjahantena 08 Mey 2018
Hiharan'ny fitsipika iombonana ireo izay manatrika ny lalao olympika amin'ity taona ity: tsy azo itondrana sakafo sy zava-pisotro avy any ivelany, tsy ekena ny fango ara-barotra rehetra ... saingy ankoatra ireo rehetra ireo, fitsipika iray izay toa nanorisory ny mpiserasera maro ny fandraràna sora-baventy hoe "Alefa Shina!".
Amerika Avaratra 07 Mey 2018
Mpitoraka bilaogy maro no niresaka tamim-pahamalinana ny momba ireo olan'ny angovo, avy amin'ny angovo nokleary, ny 'herinaratra apetaka dia miasa avy hatrany ' ny "Clean Ambitions"- Faniriana Madion'ny shinoa ary ireo Foiben'ny Angon-drakitra Maitso. Na any Afrika Atsimo izany, na any Shina na any Amerika, nahatonga ireo mpitoraka bilaogy hieritreritra vahaolana ny olana momba ny angovo.
Fitantanam-pitondrana 05 Mey 2018
Mediam-bahoaka 04 Mey 2018
Maso Mivadibadika Miandrandra Lanitra, Namaky ny Fahanginana Tao Amin'ny Tranonkala Shinoa Faran'izay Voaporitry ny Sivana
Fanampenam-bava 03 Mey 2018
"Toy ny tsela-baratra nandrava fanehoankevitra an'arivony maro nideràna ary nanakona ireo kabary nataon'ireo olona an'arivony maty atidoha..."